Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Sargaal Nabad Sugida Wayaanaha Ah oo Baxsaday.
Daawo: Sargaal Nabad Sugida Wayaanaha Ah oo Baxsaday.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu baxsaday madaxii ciidanka nabad sugida ee wayaanaha kaas oo sida lasheegay isu dhiibay jabhadaha hubaysan ee wayaanaha ladagaalama.
Ninka baxsaday oo lagu magacaabo Ayalew Mengesha ayaa lasheegayaa in uu bixiyay sirtii ugu badnayd ee abid labixiyo taas oo kooxda TPLF ay aad uga xumaatay, Ayalew Mengesha ayaa sheegay dhamaan tabihii uu wayaanuhu isticmaali jiray markay xakamaynayaan kacdoonada lagaga soo horjeedo.
Ayalew Mengesha ayaa sheegay in amarka lasiiyay ciidamada uu ahaa in ay dil, dhac, kufsi iyo xidhayba samayn karaan taas oo aan lagula xisaabtami doonin qof ciidan ah.
Sidoo kale madaxa nabad sugida ee baxsaday Ayalew Mengesha ayaa sheegay in dhamaan xabsiyada iyo goobaha dadka lagu jidh dilo ay joogaan dad howlahaas loo carbiyay oo udhashay qoomiyada Tigreega.
Sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay qaabkii ay jaajuusiinta usoo dirsan jireen, sidoo kale wuxuu sharaxaad dheer kabixiyay amarka wayaanaha ee ah in bahdil lagusameeyo dhalinta si loowaayo qof kacdoon sameeya.
Sargaalkan isusoo dhiibay kacdoon wadayaasha ayaa sheegay in uu u adkaysan waayay dhibaatada lixaadka leh ee lagu hayo dadka shacabka ah taas oo sida uu sheegay qof damiir leh uusan u adkaysan karin.
Sikastaba ha ahaatee waxaa batay baxsadkii iyo kala cararka saraakiisha wayaanaha kuwaas oo intooda badan ay isu dhiibayaan jabhadaha hubaysan ee ladagaalama wayaanaha.